Ngisho nasezikhathini Soviet, osebenza nabo nomakhelwane aqala ukumfela umona labo ngakwesokunxele (eholidini noma kwi ithikithi) e Gurzuf. Phumula, ukubuyekezwa okuyinto walalela kamuva elalibhekwa njengelinye hhayi kuphela "lolwandle" futhi ekhethekile. Ngemva Gurzuf - kwaba Italy yethu. Lapho, ngaphezu izakhi eziyisisekelo a yimpumelelo iholide, ulwandle kanye ilanga, nazo ukubukwa obumangalisayo. Imvelo Beautiful (owodwa Bear Intaba kuwufanele), budebuduze Artek, emazombezombe ezitaladini, uhlanganyela phezu kwamanzi "Genoese" izindlu, laseChekhov sika kuyo ehlobo, amatshe olunothile - konke lokhu kubangelwa ukububula ngomdlandla.
Kodwa uthembisa khona ngempela yesimanje Gursuf iholidi? Buyekeza ngaye manje - uma Kunjengoba ezigcwele ukubonga? Sizozama ukuhlaziya, kulapho ukuthi lokhu ndawo ngokulinganayo ukumema izivakashi, ikakhulukazi "ihlobo", njengoba ezinsukwini zakudala. Okokuqala, kwakukhona zisesenjalo Ayu-Dag namadwala Adalary abangamawele. Futhi abantu, hhayi romance alien, bathi bangakwazi ukujabulela phakade, ngoba lezi izinto ezakhiwe imvelo, ngisho umbala ushintsho lwakho kuye sezulu kanye nesikhathi sosuku. Okwesibili, zonke izinyathelo okufanayo ebhishi engapheli nolwandle. Kwabanye kunzima kusimo, kodwa abantu asebenzayo kanye nezemidlalo, kunalokho, thokozani kuphela. Futhi izindlu obudala kovulandi, futhi nephunga ikhofi ezitaladini ... ukuze ngamunye, izipesheli yakhe siqu esiyingqayizivele Gurzuf iholide.
Izibuyekezo ababhukudi ngokuvamile omuhle. Beaches e Gurzuf, njengasezindaweni eziningi ezisogwini oluseningizimu zokungcebeleka, itshana, kodwa eyamukelekayo ngempela. Futhi labo asesabi ukuya kude, ungakwazi ukubhukuda ngisho at emabhishi Artek, lapho amatshe iyashelela ngakho futhi "ukhotha 'nolwandle ungakwazi umboko wayo ngaphandle udoti. Ngezikhathi zakusihlwa - ukuvakasha eduze kwaleli chibi, inyanga phezu kolwandle njengoba izigcawu Kuindzhi, izindawo zokudla, edumile iwayini YaseCrimea (ikakhulukazi kusukela ezimhlophe Muscat itshe obomvu Simila ngqo phezu ngomzana, Awukude inhlokodolobha ubukhulu of Gothic Teodoro lasendulo). Ngokuvamile, udle Gurzuf yilapho, futhi kahle. ezinhle Ikakhulukazi inyama kanye nenhlanzi kebabs. Sitolo sekudla lokuphekiwe ogwini uma umoya uvunguza olwandle, kunika izihambeli ngezibhalala, ukuze sijabulise futhi ethokomele. Ngakho kungenzeka ukuphila uthando Gurzuf!
Phumula, ukubuyekezwa okwashiya izivakashi eziningi kulezi zindawo kuyinto ithoni nostalgic. Phela, lezi zindawo walithanda izimbongi, babhali, bahlatiyi, abaculi. Nokho, ukuya ensimini sibhedlela lempi, ubunyoninco Museum Park futhi umthombo "Ubusuku", akusiyo silula, njengasezulwini kwamaSoviet. Kodwa kungenzeka. Kusukela emzaneni Ihlela izinkambo eziningi - e Yalta, Ai-Petri, ku -Nest Swallow sika. Ngokuvamile, isikebhe uhambo, ngezinye izikhathi - ibhasi izinkambo. Ukuthenga kubo esikhumulweni semikhumbi, futhi hhayi kusukela touts. Indawo lapha eqolo - kungcono Gurzuf! Amaholide 2013 (kwegumbi) iphathwa okungenani kanye ruble isigamu ayizinkulungwane ikamelo. Okusho ukuthi, uma e sizini. I Kungashiwo okufanayo mayelana ukudla, ngakho ukonga ngaphezulu ukupheka ekhaya, uma uvumela abanikazi. Nokho, uma intengo ngawe - akuyona inkinga edolobhaneni kungcono ukuya zokudlela ubudala abathandekayo. Ngo izinga yabo kusobala ngokushesha ukuthi kwaba yinto okunethezeka.
ulwandle Hlanza futhi emuhle, cishe ayidingi ukujwayela isimo sezulu - lokhu kubalulekile ukwedlula okuhle iholide eCrimea. Gurzuf, ukubuyekezwa zazo, ngisho noma akhononde amanani entengo aphezulu, namanje ukugubha ubuhle nangenduduzo resort, abasanda kuqala ukuhlinzeka hhayi eqolo, elula futhi zikhululekile impesheni yangasese. Ngokungafani amahhotela ezivamile kanye zokungcebeleka, kukhona, njengoba umthetho, abe ekhishini nazo zonke izindawo, i-Inthanethi, zesimanje ezenza, swimming pool ... Ngakho labo ingane ecabanga Gursuf ikhaya lesibili, kukhona Kwethenjwa ukuthi ekugcineni kwenza indawo yangempela European.
Kurai asemaqeleni - umcengezi intermontane e sifinyelela Maphakathi nomfula Chui. Journey Altai
Primasol Louis Ionian Sun 4 *. Emahhotela aphambili e neCorfu: Izibuyekezo
Cooker hoods nge uxhumano ukupholisa: i Uhlolojikelele, isimiso, amanani. Xhuma hood cooker kuya ukupholisa
Ngizokutshela ukuthi ukubilisa amaqanda
Han Ahmat, le zidlamlilo Omkhulu. Umlando Ase-Asia Ephakathi
Izinto bemvelo - yilokho asizombelezileko